Maitiro ekuisa theme mune Gnome | Linux Vakapindwa muropa
Kuisa theme yedesktop chinhu chinoitwa nevashandisi vazhinji kana vaine sisitimu nyowani yekushandisa pamatafura avo. Icho chinhu chakajairika uye chine musoro pane chikamu chevakawanda.
Asi hachisi chinhu chiri nyore kwazvo pane mamwe maGnu / Linux desktops, zvirinani kuti hazvisi nyore kana zvisingazivikanwe. Tevere isu ticha tsanangura maitiro ekuisa theme mune gnome uye kuishandisa. Chinhu chichava nyore kubva pane ino dzidziso.
Kutanga isu tinofanirwa gadza iyo Gnome Tweak Turu. Ichi chishandiso chinonakidza kugadzirisa Gnome uye chichava chekubatsira kukuru kuzviita nenzira iri nyore. Gnome Tweak Chishandiso chinowanikwa mune dzinoverengeka zvepamutemo zvekuparadzira zvinyorwa, saka zvinogona kuitwa kuburikidza nekuparadzira software maneja (apt-tora, yum, dnf, nezvimwe ...)
Gnome-Tarisa inzvimbo yakachengetedzeka patinogona kuwana madesktop desktop eGnome
Kana tangove neGnome Tweak Turu yakaiswa, isu tinofanirwa kutsvaga desktop theme yatinoda. MuPlasma neCinnamon isu tine sarudzo yekuitsvaga kubva kuchishandiso chaicho, asi muGnome tinofanirwa kuenda kunzvimbo dzekunze.
Yakanaka repository yemisoro yeGnome iri Gnome-Tarisa, webhusaiti ine zvakawanda zvinhu zvekushongedza desktop yedu, kusanganisira madingindira eGnome.
Kana tangova nemusoro wenyaya wakasarudzwa uye kurodha pasi. Tinofanira kudaro unzip iyo mufaira .themes kubva kudura redu reKumba. Kana iwe uchida kugadzirisa zvidhori uye mafonti, isu tinofanirwa kuvhura zvinhu izvi mumafolda .icons mune zvidhori uye.
Kana izvi zvangoitwa, isu tave kufanirwa udza Gnome kuti dingindira idzva rinofanira kushandiswa. Kune izvi isu tinoshandisa iyo Gnome Tweak Chishandiso apo iyo nyowani dhatabhesi diki ichaonekwa. Isu tinosarudza iyo uye tinya bhatani rekushandisa. Uye wakagadzirira. Nezve izvi isu tatoisa nyowani desktop theme yeGnome.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Maitiro ekuisa theme mune Gnome
Apricity OS yamiswa